Date My Pet » Ny Meaning ny Kiss
Last nohavaozina: Jan. 21 2021 | 2 min namaky
Ny dikan'ny oroka? Ny fanontaniana an-tapitrisany dolara amin'ny fifandraisana. Mino aho fa mila nataony tao amin'ny manodidina ny fifandraisana ianao sy ny olona ianao eo amin'ny fifandraisana amin'ny. Raha toa ianao ka nanorim-ponenana tao amin'ny fifandraisana raha oharina amin'ny fifandraisana vaovao izay mety ho somary dikany mazava ho azy fa samy hafa, fa ny toetra ny olona manana ianao amin'ny betsaka ny azo atao miaraka ny dikan'ny hoe azy ireo koa. Ndeha isika hijery ny dikany samihafa izany be voninahitra, na tsy dia be voninahitra, fanorohana.
Raha toa ka ny tia no tantaram-pitiavana, tactile karazana ianao dia ho tena sambatra dia handro amin'ny fanorohan'ny! Tantaram-pitiavana ny taloha maka ho zava-dehibe ny fitiavana sy ny oroka dia ho feno hatsaram-panahy, passion, ary ny fitiavana. Hanaiky izany fa ho azo antoka ny mampiseho azy ireo fitiavana tsy manam-petra indray. Miezaka ianao na dia tsy ny tena tantaram-pitiavana eo amin'ny natiora ny tenanao. Ny tantaram-pitiavana ho toy karazana izany na dia fifandraisana vaovao na nanao fifandraisana fa ho toy ny fifandraisana mitombo sy mandroso ny oroka dia ho lasa manan-danja bebe kokoa.
The nanana filan-dratsy Type
Ny karazana filan-dratsy amin'ny fiarahana amin'ny lamaody dia tokony halaina miaraka amin'ny sira kely iray na dia izany aza! Rehefa mandeha ny fotoana fanorohan'ny ireo miala amin'ny fanirian-dratsy ny fitiavana raha mahazo ny fifandraisana matotra kokoa. Omeo fotoana fotsiny. Ny nanana filan-dratsy ireo karazana maka fotoana mba Aoka ny fitiavana ao am-pony, fa rehefa ianao no ho azy ireo dia ho azo antoka fa aoka fantatrao momba azy io! Ary dia nanoroka ny ho fomba iray ataony!
Misy karazana oroka marobe avy amin'ny maharitra maharitra, oroka mafana ny malefaka, oroka malefaka. Misy fanehoam-pitiavana ampahibemaso ary fanehoam-pitiavana manokana.
Manontolo ao amin'ny oroka brimming ny filan'ny nofo no famantarana ny tena fitiavana. Tsy te handao ny molotra ny anao sy ny dia fa mafy sy ho tsara tarehy izay andro izany ianao dia samy tsirairay ny izao tontolo izao, tafalatsaka ao anatin'ny fotoana fohy sy lalina mifandray amin 'ny alalan' ny herin 'ny oroka.
The malefaka, oroka malefaka dia iray izay be dia be ny mpivady amin'ny fitiavana fampiasana. Izany dia ny fotoana izay tena mahazo aina izy ireo, fa miara-dia ihany koa maneso ny oroka izay mampiasa olona maro ho toy ny voalohany, satria izy ireo oroka hafahafa sady tsy natoky ny fomba hanatonana io fotoana lehibe eo amin'ny fifandraisana.
Ny oroka ampahibemaso dia azo raisina amin'ny fomba roa ary miankina amin'ny olona ifandraisanao, ianao mahalala ny fahasamihafana sy ny antony manosika. Ny fomba iray dia ny fampisehoana fa manana olona iray amin'ny lafiny ratsy izy ireo fa amin'ny lafiny tsara kokoa, ny hafa manao an'io satria mirehareha miaraka aminao izy ireo ary tsy miraharaha izay mahalala anao miaraka.
Be dia be ny olona tsy tia ny vahoaka rehetra fampisehoana-pitiavana nefa tsy midika hoe tsy tia anao. Toy ny oroka ampahibemaso na dia afaka mandeha roa aza izy io ary miankina amin'ny olona miaraka aminao ihany izany. Dia ho mora ho anao ny mahafantatra na dia nanoroka anao manokana satria tsy mino, na dia hafahafa amin'ny PDA na dia satria tsy ampy ny mirehareha aminareo mba hanoroka anao ampahibemaso.